Universal Music yanga isiri kunyepa: Yekupedzisira dambarefu raLady Gaga haringauye chete Apple Music | Ndinobva mac
Universal Music yanga isiri kunyepa: Yekupedzisira album yaLady Gaga haizouya chete Apple Music
Isu tanga tichitaura kwemazuva akati wandei nezve gakava riri muSpotify, Apple Music, Apple's yakasarudzika system ... Mazuva mashoma apfuura takaburitsa chinyorwa umo isu takakuzivisa iwe nezve ramangwana zvirongwa zveUniversal Music rekodhi kambani, zvirongwa zvisinga zvinosanganisira kupa chero rudzi rweakasarudzika emaarubhamu matsva akaburitswa neavo vanomiririra artists kana mapoka Iko kushandurwa kwechinzvimbo kwakakurudzirwa nekusunungurwa kweazvino Frank Ocean album. Chii pakutanga chingaite senge Universal hita, nhasi yasimbiswa seicho chaicho, nekuti sekureva kwekambani dambarefu reGame Gaga harizosvika pane chero basa remimhanzi rinotenderera chete.
Sezvakataurwa neHITS Zuva Nezuva Riri, ichitsanangura masosi eese solvency ane hukama neUniversal Music, Iyo kambani yakafunga kuti hapana mimhanzi yekushambadzira sevhisi inokwanisa kuita kuti iwanikwe iyo nyowani Lady Gaga dambarefu, nhamba yechishanu yemuimbi, chete. Iyi album nyowani yakanzi Perfect Illusion yaisazosvika kuApple Music kunyangwe chibvumirano chakasainwa pakati peApple, Lady Gaga neInterscope.
Izvo iwe zvaungade chaizvo kuziva ndezve huwandu hwemari Apple yaizoda kuisa patafura kukwanisa kupa iyo nyowani Lady Gaga dambarefu chete mukuwedzera pakuziva kuti vangani vatsva vanyoreri vangabatana neApple Music nekuda kwekuburitswa uku.
Panguva ino rekodhi kambani Universal Music Yaive yekutanga yekuvhara masuo eiyi mhando yekusarudzika yega. Zviripachena kuti aya marudzi ekuburitsa haabatsiri kukambani, kunyangwe paine huwandu hwakawanda hwemari iyo Apple inogona kupa maartist, nekuti zvikasadaro zvaisazove nechikonzero chekumira kuzvitengesa kumasevhisi masevhisi mukutenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Universal Music yanga isiri kunyepa: Yekupedzisira album yaLady Gaga haizouya chete Apple Music
Perfect Illusion ndiro zita remukadzi wekutanga kubva kualbum yechishanu yaLady Gaga, iro zita remubhuku harisati raburitswa
Ndizvozvo, iye oga ndiye ane zita iro!
Santiago Esposto (@santiagomonster) akadaro
Zvirinani kusave zveavo chete vane Apple Music, ini handibvumirane nazvo! Big gaga uye hongu discography !!!
Pindura kuna Santiago Esposto (@santiagomonster)
Spotify inogona kunge iri kutsiva kune maartist ari kupa zvakasarudzika paApple Music